ဒယ်နီ ၊ ဒယ်ပြာ သုံးသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးများ – Daily Feed MM
Admin_John | June 29, 2020 | Knowledge | No Comments
ာ မီးဆွဲအား 2000W ရှိပြီး မီးအတိုး အလျော့ လုပ်လို့ ရတာကြောင့် Extension Cord (ကြိုးခွေအဝိုင်းများ)နှင့် လုံး၀ မသုံးသင့်ပါဘူး။2️. အခုနောက်ပိုင်း ထွက်သမျှ ဒယ်နီတွေမှာ Auto cut-off system (အလိုလျောက်မီးဖြတ်ပေးတဲ့စနစ်) ပါလို့ အတိုးအလျော့ ဘုလေးကို အဆုံးထိမထားပဲ လိုသလို ချိန်သုံးရင် *ချက်နေရင်း ဆီပူမယ် ကြံရင်း အိုးက မပူတောရင်း* အဲလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်က ဟင်းချက်နေရင်း အမြဲတမ်း အိုးကို
ာ မီးဆြဲအား 2000W ရွိၿပီး မီးအတိုး အေလ်ာ့ လုပ္လို႔ ရတာေၾကာင့္ Extension Cord (ႀကိဳးေခြအဝိုင္းမ်ား)ႏွင့္ လုံး၀ မသုံးသင့္ပါဘူး။2️. အခုေနာက္ပိုင္း ထြက္သမွ် ဒယ္နီေတြမွာ Auto cut-off system (အလိုေလ်ာက္မီးျဖတ္ေပးတဲ့စနစ္) ပါလို႔ အတိုးအေလ်ာ့ ဘုေလးကို အဆုံးထိမထားပဲ လိုသလို ခ်ိန္သုံးရင္ *ခ်က္ေနရင္း ဆီပူမယ္ ႀကံရင္း အိုးက မပူေတာရင္း* အဲလို ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က ဟင္းခ်က္ေနရင္း အၿမဲတမ္း အိုးကို
မြေဝယ်မည့်သူတိုင်း သိသင့်သည့် ဂရန်အတု အစစ် အလွယ်အတူ ခွဲခြားနည်း